Vaovao - Fahaiza-mividy ny faritra misy fiara
1. Hamarino raha malama ny tonon-taolana. Mandritra ny fitaterana sy ny fitehirizana ireo kojakoja fanampiny, noho ny hovitrovitra sy ny fifandonana, ny burr, ny fientanentanana ary ny fahatapahana dia matetika mitranga eo amin'ny faritra iaraha-miasa.
Fahasimbana na triatra, misy fiatraikany amin'ny fampiasana ampahany. Tandremo ny manamarina rehefa mividy.
2. Hamarino raha feno ny mari-pamantarana. Ny kalitaon'ny fonosana ivelany an'ny vokatra tena izy dia tsara, ny sora-tanana amin'ny boaty famonosana dia mazava ary ny loko matevina dia mamiratra. Ny boaty sy ny kitapo fonosana dia tokony homarihina amin'ny anaran'ny vokatra, ny famaritana ary ny maodely, ny habetsahana, ny mari-pamantarana voasoratra anarana, ny anaran'ny orinasa, ny adiresy ary ny nomeraon-telefaona, sns. Ny mpamokatra sasany koa dia manao marika manokana amin'ny kojakoja. Ny ampahany manan-danja sasany, toy ny generator, mpaninjara, paompy tsindrona solika, sns., Dia misy fitaovana torolàlana, taratasy fanamarinana ary tombo-kase an'ny inspecteur koa hitarihana ireo mpampiasa hampiasa sy hitazona tsara. Rehefa mividy dia tokony ho fantatrao tsara izany sao tsy mividy vokatra sandoka sy ambany,
3. Hamarino raha miovaova ireo faritra mihodina. Rehefa mividy paompy solika sy fivoriamben'ny faritra mihodina hafa dia ahodin-tànana ny paositry paompy, izay tokony ho malefaka ary tsy misy stagnation. Rehefa mividy bearings mihodina, tohano amin'ny tànana ny peratra misy atiny ary ahodina ny peratra ivelany amin'ny tanana iray hafa. Ny peratra ivelany dia tokony ho afaka hihodina haingana sy malalaka, ary avy eo ajanony miodina tsikelikely. Raha toa ka tsy mandeha tsara ireo faritra mihodina, dia midika izany fa ny harafesina anatiny na ny fanovana, aza mividy.
4. Hamarino raha toa ka salama tsara ny faritra miaro. Ny ankamaroan'ny faritra dia mifono fonosana miaro ao amin'ny orinasa. Ohatra, ny pinona piston sy ny kirihitrala dia arovan'ny savoka parafin; ny tampon'ny peratra piston sy ny valizy misy varingarina dia voahosotra menaka antirust, ary ny valizy sy ny pistona dia fonosina amin'ny fonosana fonosana ary asiana tombo-kase amin'ny harona plastika rehefa alentika ao anaty menaka antirust. Raha simba ny tanany vita amin'ny tombo-kase, very ny taratasy famonosana, very ny menaka antirust na paraffin, tokony averina ary soloina.
5. Zahao ny refy geometrika raha misy fiovana. Ny faritra sasany dia mora simba noho ny fanamboarana, fitaterana ary fitahirizana tsy mety. Rehefa manamarina dia azo ahodinkodina manodidina ny takelaka fitaratra ireo faritra misy ny zoro mba hahitana raha misy fivoahan'ny hazavana eo amin'ny mpiray eo anelanelan'ireo faritra ireo sy ilay takelaka fitaratra hitsara raha miondrika izy; Rehefa mividy ilay takelaka vy na lozisitra eo amin'ny takelaka entin'ny clutch ianao dia azonao atao ny mitazona ny lovia vy sy ny lozisialy eo imasonao mba hijerena raha tsy misy dikany izany. Rehefa mividy ny tombo-kasen-diloilo dia tokony boribory ny tarehy faran'ny tombo-kase misy menaka miaraka amin'ny vera fisaka tsy misy miondrika; Ny sisin'ny ivelany amin'ny tombo-kase misy menaka tsy misy rihana dia tokony ho mahitsy sy mivadika tanana. Tokony ho afaka hiverina amin'ny toetrany voalohany izy io aorian'ny famoahana azy. Amin'ny fividianana karazana pads isan-karazany dia tokony hihaino tsara ihany koa ny fizahana ny habe sy ny endriny geometrika
6. Hamarino raha tsy misy ireo faritra fivoriambe. Ny ampahany amin'ny fivoriambe ara-dalàna dia tsy maintsy feno sy tsy miova mba hiantohana ny fivorivoriana sy ny fandidiana mahazatra. Raha misy ampahany kely amin'ny faritra fivoriambe sasany tsy hita, dia tsy hiasa na hofoanana mihitsy ireo faritra fivoriambe.
7. Hamarino raha efa harafesina ny velaran'ny faritra. Ny ambonin'ireo kojakoja faran'izay mahay dia samy manana ny marimarina sy ny famaranana malama. Arakaraka ny maha-zava-dehibe ireo kojakoja fanampiny, dia avo kokoa ny famaritana, ary vao mainka henjana ny fonosana manohitra ny harafesina sy manohitra harafesina. Tandremo ny manamarina rehefa mividy. Raha hita fa misy harafesina ny faritra, potika ny holatra na ny faritra vita amin'ny fingotra ary very ny elitika, na miharihary misy tsipika fanodinana eo amin'ny sehatry ny diary, dia tokony hosoloina izy ireo
8. Hamarino raha madiodio ireo singa mifamatotra. Ho an'ny kojakoja misy singa roa na maromaro, ny ampahany dia voahidy, mifatotra na mifamatotra, ary tsy mahazo avela eo anelanelan'izy ireo. Ohatra, ny plunger paompy solika sy ny sandry mifehy dia mivondrona amin'ny alàlan'ny fanerena, ny kodiarana entin'ny kodiarana ary ny takelaka vy dia rivet, ny lozam-pifamoivoizana ary ny takelaka vy dia rivet na mifatotra; ny rafitry ny singa sivana taratasy dia niraikitra amin'ny taratasy sivana; Ny tariby mifarana amin'ny herinaratra dia mihodina. Raha misy fahaleovan-tena hita mandritra ny fividianana, dia s